NgeSabatha elahlekileyo kumntu weeNtlanga-uRabhi uMichael Avraham
NgeSabatha ilahlekile kwiiNtlanga
Iimpendulo > Udidi: Isifundo seTalmudic > NgeSabatha ilahlekile kwiiNtlanga
uIsake Ubuzwe kwiminyaka emi-6 eyadlulayo
1) ITorah yasikhulula kwiSabatha elahlekileyo ukuya kwiNtlanga…
Oku kunxulumene nokokugqibela (uHazo'a nabanye) ekugxininiseni ukuba imithetho esixhenxe enyanzelekileyo nabangengomaYuda zizinto ezisisinyanzelo kwicala 'lokunyaniseka nokuziphatha'.
Yaye khangela amazwi kaMaimonides ngokuphathelele ukukhululwa kwenkunzi yenkomo yakwaSirayeli eyaxabela inkunzi yenkomo yoweeNtlanga, nto leyo engayifuniyo emthethweni wabo . . .
I-Gemara kwiSanhedrin ithi akuvumelekanga ukubuyisela ilahleko kumntu weentlanga… URambam wachaza ukuba oko kwenzelwa ukuba angomelezi abangendawo behlabathi (ngoko iNtlanga enesidima ifanele ivunyelwe, nokuba ingengommi konke konke). URashi wachaza ukuba ityhila ukuba akabuyi ngenxa yomyalelo wokubuyela, kuyo nayiphi na imeko kukho isalelo (ngaphandle kokuba kwenziwe ngenye indlela ngenxa yokungcoliswa kukaThixo okanye ngenjongo yokungcwalisa igama)...
Umbuzo wam ngowokuba ingaba le migaqo ingatshintsha na ngokokutshintsha 'ukunyaniseka nokuziphatha' okwamkelwa ngabantu? Kwimeko apho wonke umntu ebona ukuba eyona nto ilungileyo kukubuyisela ilahleko, ngaba umthetho uya kutshintsha? Kwamanye amazwe kukho nemithetho (emva koko kuyenzeka ukuba kumiselwe kwimithetho kaKim 'imithetho', kwaye ukuba intlanga ibophelelekile asiyi kuba ngaphantsi kwayo)…
Kwanokuba kuthiwa akukho sinyanzelo, 'kuphela' kukuziphatha okungeyoyo iTorah, ubuncinane akuyi kubakho mbopheleleko (kwanangokukaRashi)… ITorah ayinyanzelisi kodwa kukho isizathu sokubuyela, ukuziphatha okwamkelwe kwixesha lethu… Kwaye hayi ngenxa ye-mitzvah…
Abanye oorabhi babhala ukuba namhlanje kuyimfuneko ukubuya ngenxa yokungcwaliswa kwegama… kodwa kum kubonakala ngathi kukubaleka, ukungcwaliswa kwegama akunyanzelekanga, kwaye ngokuqinisekileyo kuya kuvunyelwa kuphela xa eneneni enenjongo yokungcwalisa igama…
2) Ithini intsingiselo yokubuya “ngenxa yokungcwaliswa kuka-Thixo” (njengoko kucatshulwe kumabali aseYerusalem)… Ukuba iTorah ayizange iphelele nje ngokudubula kodwa yalela – yeyiphi into ephosakeleyo eyayiza kubancoma abantu bakwaSirayeli ngento ababeyenzela bona? Ngaba ngokwenene isalelo?
UMichi Abasebenzi Uphendulwe kwiminyaka emi-6 eyadlulayo
Ngokwenene, ndiyavuma ukuba umbuzo wokungcwalisa igama ngumcimbi ongathanga ngqo. Ngokombono wam kukho uxanduva olupheleleyo lokubuyisela namhlanje, njengoko uHameiri ebhala. Nina nibhala ukuba ukwenza oko ngokwesiko, kungekhona ngokomthetho, yaye nam ndiya kugqabaza ngale nto ngokubona kwam: Okokuqala, kuba namhlanje kungumthetho, kungekhona ngokokuziphatha, ekubeni kunyanzelekile ukuba kubuyiswe indoda. ilahleko kumntu weentlanga kanye njengomJuda kwaye evela kwivesi enye. I-Gemara kwi-BK Lez ichaza ngokucacileyo ukuba bavumele imali ku-Israyeli kuphela ngenxa yokuba abazange bagcine i-XNUMX mitzvos yabo. Okwesibini, nokuba isusa yintoni ingxaki ngaloo nto?!
Kwaye into oyibuzile ukuba ingaba isithintelo apho sifumene ukuba kuvunyelwe ukwalelwa ngokuchasene nokungcoliswa kunye nokungcwaliswa kwegama, ngumniki. Oku kwakungesosalelo kodwa yimpendulo kwimeko ethile yeeNtlanga ngelo xesha, ngoko nangexesha labo kwakukho indawo yokubuyisela ukuze kungcwaliswe iGama. Obu bubungqina kanye bokuba oku akusiyo ukuvalwa.
Bona malunga noku kumanqaku am kwiiNtlanga kwixesha lethu apha:
Kwaye kwisimo sengqondo malunga neentlanga kunye notshintsho kwi-halakhah apha.
NgokukaHameiri kucacile ukuba kufuneka ibuyiselwe…
Ndiyabuza ngokwabalamli abangazange bayilandele indlela yakhe, kwaye imithetho yeentlanga kwixesha lethu akufanele ifaniswe nemithetho yomhlali ...
I-Gemara kunye ne-poskim ichaza ngokucacileyo ukuba ngaphandle kokukhululwa kweTorah kukho isithintelo kulo mbandela (ekutyholwa ukuba ungowaseThekwini), kwaye wade wajongana nokuqiqa kwakhe ...
Ngokutsho kukaRashi, ingongoma kukubonisa ukuba sisabela ngenxa yesimangalo kungekhona enye into.
Kodwa lowo wenza egameni lokuziphatha kakuhle-ngokucacileyo wenza kanye oko izilumko zazifuna ukukuthintela, ufumanisa ukuba le nto akayenzi ngenxa yezulu.
Okokuqala, akuyomfuneko ukuba indlela Rashi nokuba. Kungenzeka ukuba isalelo kukwenza ngenxa yemigaqo-siseko yeentlanga okanye ukufumana inkoliseko emehlweni abo. Kodwa ukwenzela isimilo esilungileyo kufana nokwenzela ukungcwaliswa kukaThixo. Ukuziphatha kukwanyanzeliswa kuthi kwiTorah (nenze okulungileyo nokulungileyo).
Nangona kunjalo, nokuba unyanisile ukuba kukho isithintelo sokwenza njalo ngenxa yokuziphatha, andiyiqondi indlela ocebisa ngayo ukuba oku kufuneka kutshintshe. Okokuqala, ukuba ukuziphatha namhlanje kuthetha ukuphendula ngoko kwakhona wenza ngenxa yokuziphatha kwaye oko akuvumelekanga. Okwesibini, ngokulula kwabo, nangomhla wabo, kwakungumyalelo wokuziphatha, kuba ngokombono wakho kwakungavunyelwa ukuba baphindezele ngokuziphatha.
Kodwa zonke ezi zizinto ezingaqhelekanga. Ukususela nini kuthintelwa ukwenza into echasene nokuziphatha ngenjongo yokubonisa ukuba ubani wenza ngokuchasene nomthetho? Zizinto ezididayo ezi.
Umbuzo ngowokuba ingaba isimilo sinokutshintsha...
I-Torah yayikwalela kuphela ukubulala nokuphanga kwiiNtlanga ngenxa yokuba kwakugqalwa njengobulungisa nokuziphatha, kwaye kanye njengokuba abeeNtlanga ngokwabo bazinikele kuphela ekunyanisekeni nasekuziphatheni ngokokuziphatha nathi sinjalo kubo. ukuba sibopheleleke phakathi kwethu kuphela (kwaye ngokukaRashi nokuba salelwe nakwabanye, ukuze singasithelisi)
Andiqondi ukuba ingxoxo ingantoni. Sendiyichazile. Ngokuqinisekileyo imilinganiselo yokuziphatha inokutshintsha. Kodwa ukuba ngokombono wakho uRashi uyakwalela ukwenza izinto ngeenjongo zokuziphatha (nto leyo ngokucacileyo engekho ngqiqweni ngokokubona kwam) ngoko akuyi kuwutshintsha umthetho. Kuya kubakho isibophelelo sokuziphatha kunye nokuvinjelwa kwe-halakhic.
Joyina abongezelelweyo 3,092 ababhalisile
Ucinga ntoni ngeziVumelwano zase-Oslo?
Izihlalo ezincinci zeVS eziphakamileyo zesikolo
Ukuzibulala? Ubuncinci ngokutsho kukaThos.
Eli K. Vula Impendulo kuBhahali uShem Tov kunye nokutshaya, umphefumlo kaRabbi Nachman waseBreslav
inyamakazi Vula Impendulo kuBhahali uShem Tov kunye nokutshaya, umphefumlo kaRabbi Nachman waseBreslav
Musa ukongeza kuyo, unganciphisi kuyo Vula Impendulo kwiphulo likaNida
ukugqitywa Vula Ngokusweleka kongasekhoyo uProf David Halvani Weiss (uluhlu lwama-485)
Isilwanyana sakhe Vula Ngokusweleka kongasekhoyo uProf David Halvani Weiss (uluhlu lwama-485)